Keeniyaan Dubartii Hospitaala keessatti lafarratti deessef beenyaa kaffale - BBC News Afaan Oromoo
Keeniyaan Dubartii Hospitaala keessatti lafarratti deessef beenyaa kaffale
Goodayyaa suuraa Manni Murtii mirgi Josefaayin Majaanii sarbameera jechuun murteesse
Hospitaala Kaawuntii Keeniyaa keessatti dubartii hakiimootaan qaama isheerratti dhiibbaan gahee, daa'ima ishee lafarratti akka deessuu dirqamtee beenyaa doolaara 25,000 argatte.
Abbaan murtii Mana Murtii olaanaa Bungoomaa mirgi dubartii Josefaayin Majaanii dahumsarratti sarbameera jechuun murteesaniiruuf.
Majaaniin akka jettutti, bara 2013 tti wayita dahumsaaf gara hoospitaalaa deemtu narsoonni hospitaalichaa ishee kabalanii arrabsaniiru, bakka namoonni ishee arganitti akka deessus dhiisanii deemaniiru.
Haala yeroo sana ture viidiyoon mul'isu dhoksaatti namoota shaakala hojiif hospitaalicha turaniin waraabamee ture.
Abbaan murtii Abiidaa Aroonii mirgi haadha kanaafi kabajni namoomaa ishee Hospitaala kaawuntii Bungoomaatti sarbameera jechuun dubbataniiru. Hospitaalli kun Naayiroobiirraa gara Kaaba Bahaatti km 400 fagaatee argama.
Murteen kun sirna fayyaa haadholii cimsuun fuulduratti taateewwan kanaa wajjin walfakkaatan haala itti to'atan irratti bu'uura cimaa kaaha jedhameera.
Abukkaattoon Majaanii Maartiin Oniyaangoo akka BBCtti himanitti maamilli isaanii kun erga laffarratti deessee booda ''obbaatii kuchisiisuuf miillaan gara kutaa dahumsaatti akka deemtu dirqisiifamteetti'' jedhan.
Murteen kun dubartoota Keeniyaaf ''injifannoo guddaadha'' jedhaniiru.
''Taajajilli keennamu haala qulqulina fi kabaja qabuun kan laatamuu qabu ta'uusaaf agarsiiftuudha,'' jedhu gidduugala mirgoota walhormaataatti gorsaa seeraa gameessa kan ta'an obbo Oniyaangoon.
BBC'f Naayiiroobiirraa kan gabaasu Viktoor Kenaanii Hospitaalotni Mootummaa Keeniyaa keessa jiran meeshalee gaha tajaajila dahumsaa qulqulinaa fi gahumsa qabu kennuu isaan dandeessisu hin qaban jedha.
Murteen wayita Ministirri Fayyaa biyyattii himatni haatii takka Hosptaala biyyoolessaa Keeniyaattaa magaala Naayiroobii keessatti miidhaan saalaa narra gaheera jedhan akka qoratamu wayita murteesanitti dhagaahame .